Muxuu ka yiri Dani Alves kaddib markii ay xalay ku guuleysteen tartanka Copa America 2019? – Gool FM
Muxuu ka yiri Dani Alves kaddib markii ay xalay ku guuleysteen tartanka Copa America 2019?
(Brazil) 08 Luulyo 2019. Kabtanka xulka qaranka Brazil Dani Alves ayaa muujiyay sida weyn uu ugu faraxsan yahay, kaddib markii ay ku guuleysteen tartanka Copa America 2019.
Xulka qaranka Brazil ayaa ku guuleystay tartanka Copa América 2019, kaddib markii ay 3-1 ku garaaceen dhiggooda Peru kulankii Final-ka ahaa ee ka dhacay garoonka Maracanã.
Brazil ayaa ku guuleysatay tartanka Copa America markeedii 9-aad taariikhdeeda, kaddib markii kulankii xalay ee finalka ay 3-0 kaga badisay Peru.
Hadaba Kabtanka xulka qaranka Brazil ee Dani Alves ayaa kaddib markii ay ku guuleysteen tartankan wuxuu la hadlay saxaafada waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Wax badan ayaan dhibtoonay, balse ugu dambeyntii waxaan ku guuleysanay koobka, waan ogeyn inay tahay shaqo aad u adag, balse waxaan u diyaar garoownay si heer sare ah”.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo taageerayaasheena, qeybta farsamada, ciyaartoyda sababtoo ah waa arrin ay u qalmaan, waana wax weyn inaan farxad galino taageerayaasheena”.
“Inaan ku sugnaano garoonka Maracanã waa wax cajiib ah, waa gurigeena, waan hubaa in qof walba uu doonayo inuu ciyaaro isla markaana uu sameeyo sida ugu fiican, waan ogeyn inaan badin karno, waxaan rumeysneyn awoodeena iyo nasiibkeena”.
Yeelkadeeda, xulka qaranka Brazil ayaa waxay ku wada guuleysteen dhamaan abaal marinadii la bixiyay, Alisson Becker ayaa noqday goolhaayihii ugu fiicnaa inta uu tartanka socday, iyadoo da’ayarka Everton Soares uu noqday gooldhaliyaha ugu sareeyay tartanka, halka Dani Alves loo magacaabay ciyaaryahankii ugu fiicanaa.
RASMI: Xiddigii AS Roma ee Stephan El Shaarawy oo ku biiray koox cusub
Zlatan Ibrahimovic oo qof kasta ka yaabsaday, kaddib markii uu doortay shaxda kooxdiisa ugu fiican